iOS 11 သည် WiFi နှင့် Bluetooth ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲသည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
iOS 11 က WiFi နဲ့ Bluetooth ရဲ့လည်ပတ်မှုကိုပြောင်းလဲပေးပါတယ်
iOS 11 သည်သဟဇာတဖြစ်သော devices များအားလုံးသို့ရောက်ရှိပြီဖြစ်သည် သုံးစွဲသူများစွာသည် ၄ ​​င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များပေါ်ရှိအချို့သောအင်္ဂါရပ်များကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်တွေ့ရသည် ငါတို့ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထိန်းချုပ်ရေးစင်တာအပါအဝင်လပေါင်းများစွာအကြောင်းပြောနေတာခဲ့ကြသည်။
စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာအသစ်များ၊ ဖြတ်လမ်းများနှင့်အခြားအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောသတင်းများထားရှိခြင်းအပြင် WiFi နှင့် Bluetooth တို့မည်သို့ပြုမူသည်နှင့်ပိတ်ခြင်းခလုတ်များပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင် Bluetooth သို့မဟုတ် WiFi ကိုပိတ်ထားသလား။ သူတို့ဆက်အလုပ်လုပ်နေပြီလား။ ၎င်းသည်အမှားတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ယခုတွင်၎င်းသည်ဤကဲ့သို့သောအလုပ်ကိုလုပ်သည်။ ဒီခလုတ်အသစ်တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုမင်းတို့ရှင်းပြတယ်။
2 လက်ရှိ WiFi ကွန်ယက်မှအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ
3 Bluetooth မှအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ
4 Bluetooth နဲ့ WiFi ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ။
iOS 11 မှာ WiFi (သို့) Bluetooth ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပိတ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူး၎င်းသည်လက်ရှိ WiFi ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်သာဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားသော်လည်း၎င်းသည်အောက်ပါ iOS လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။
လက်ရှိ WiFi ကွန်ယက်မှအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ
အကယ်၍ သင်သည် Control Center ကိုပြသပြီး WiFi ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ (အပြာရောင်ဖြင့်) ၄ င်းသည်သင်ဆက်သွယ်ထားသောကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုမှရပ်တန့်သွားပြီးအခြားမည်သည့်ကွန်ယက်နှင့်မျှဆက်သွယ်မှုမရှိတော့ပါသို့သော် WiFi သည်အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားသောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ အောက်ပါတို့မှတစ်ခုခုပေါ်ပေါက်လာပါက Wi-Fi သည်သိထားသည့်ကွန်ယက်နှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။
၎င်းကို Control Center တွင်ပြန်လည်သက်ဝင်စေသည်
နာရီ 5:00 AM ရိုက်
iPhone ကို Restart လုပ်ပါ
အကယ်၍ သင်သည်ထိန်းချုပ်မှုစင်တာကိုဖွင့ ်၍ Bluetooth အိုင်ကွန်ကို (အပြာရောင်ဖြင့်) နှိပ်လိုက်လျှင် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအရာ မှလွဲ၍ ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှအဆက်ပြတ်လိမ့်မည် (Apple Watch နှင့် Apple Pencil အပါအ ၀ င်) ။ အောက်ပါတို့မှတစ်ခုမပေါ်ပေါက်မှီတိုင်အောင်၎င်းသည်မည်သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုမှဆက်သွယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Bluetooth နဲ့ WiFi ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ။
Apple မှယခုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောတစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုမှာ Settings ထဲ ၀ င ်၍ သက်ဆိုင်ရာခလုတ်များနှင့် WiFi နှင့် Bluetooth ကိုကိုယ်တိုင် disable လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီအချက်ကဘာလဲ။ အကယ်စင်စစ်များစွာသောလူကပထမ ဦး ဆုံးမှာနားမလည်ပေမယ့် Apple က WiFi နှင့် Bluetooth တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောအခြေခံကျသောလုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည်မည်သည့်အခါမှအဆက်ပြတ်မနေသင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်နှင့် အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းကိုထူးခြားစွာပြုလုပ်လိုပါကထိုသူတို့သည် Control Center အတွင်းတိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်ခြင်းအစား setting များကိုထည့်ရမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » iOS 11 က WiFi နဲ့ Bluetooth ရဲ့လည်ပတ်မှုကိုပြောင်းလဲပေးပါတယ်
12 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
“ မနက် ၅း၀၀ နာရီနာရီမှာရောက်သွားတဲ့အချိန်” ကငါ့ကိုကောက်သောမြည်းနှင့်ချန်ထားခဲ့ပြီး၎င်းတွင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောရှင်းပြချက်ရှိပါသလား။
ငါအတိအကျတူညီသောအရာကိုတောင်းခဲ့သည်။ ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး ...
ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဘယ်တော့မှမဖွင့်သင့်ကြောင်း၊ ဒါကိုနားလည်ပေမယ့်ဘယ်အချိန်မှာ activate လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုရွေးလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Apple ပါ။ နောက်နေမွမ်းမံခြင်းမရှိပါ!
အဆိုးဆုံးကတော့၊ ကျွန်ုပ်မွမ်းမံခြင်းမရှိပါကစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုလည်းမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Apple! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!!!
အကယ်၍ သင်သည် Control Center မှ Bluetooth ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါက Apple Pencil သည်လည်းအဆက်ပြတ်သွားသည်။ ထို့အပြင် Bluetooth icon သည် Pencil နှင့်ချိတ်ဆက်သည်ဖြစ်စေအမြဲတမ်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ iOS 10 တွင်ပြတ်တောက်သွားသောအခါ၎င်းသည်အရောင်မှိန်ပြီးပြင်းထန်သောအရောင်နှင့်ဆက်သွယ်သည်။ ယခုသင်ကဝစ်ဂျက်ဖန်သားပြင်ထဲမဝင်လျှင်ခဲတံချိတ်ထားသလားမသိပါ။ IOS 11 သည်ဤအတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်ကြောက်လန့်စရာဖြစ်နေပြီးဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။
ဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုကဆဲလ်ဖုန်းကို Wi-Fi ကွန်ယက်နဲ့ချိတ်ဆက်နေတုန်း၊ Airplay ကတေးဂီတဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ကိုငါလွှင့်တဲ့အချိန်မှာဥပမာ WhatsApp စာတိုတွေ၊ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်နှင့်အတူ Aires သည်ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိပဲစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
settings ကိုမသွားဖို့မိုဘိုင်းဒေတာကိုထိန်းချုပ်မှုစင်တာမှ activate လုပ်နိုင်ဖို့အချိန်အကြာကြီးတောင်းဆိုခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် Wifi ကိုပိတ်ထားရန် settings သို့သွားရန်လိုအပ်သည်။
ဒါကြောင့်မနေ့ကဘက်ထရီကဒီရေကျသွားတယ်။ ၆ နာရီအတွင်းမှာကျွန်ုပ်ဖုန်းကို ၆၀% ရှိထားပြီးသား
တစ်နေကုန်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသောငါတို့အတွက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ wifis နှင့် blutuses များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖုန်းသည်အမြဲတမ်းရှာဖွေနေသည်။
သူတို့အရင်ကပြောခဲ့သကဲ့သို့ Control Panel ထဲက data ခလုတ်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာတောင်းဆိုခဲ့ပြီးအခုဘာကိုတင်နေပြီဆိုတာကငါတို့ပြီးသား ...
? ဆိုလိုတာကငါ iPhone ကို update လုပ်တိုင်း 5am မှာနေ့တိုင်းငါဘယ်တော့မှမသုံးပေမဲ့ Bluetooth ကို activate လုပ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတာလား။
အဲဒါကျွန်တော့်အတွက်ရယ်စရာပုံပဲ Bluetooth ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှသုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ iPhone နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် BT ကိရိယာများမရှိပါ။
အကယ်၍ သင်၎င်းကိုအသုံးမပြုပါက၎င်းကို control panel မှဘယ်တော့မှမပိတ်ပါနှင့်၎င်းသည်နံနက် ၅း၀၀ နာရီတွင်မှမဖွင့်နိုင်အောင်တားဆီးပါလိမ့်မည်။
maria candela ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို! ios ကို update လုပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဆယ်လူလာဒေတာပိတ်ထားသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အပူတပြင်းဖြစ်သည် !!!! ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ?
maria candela အားပြန်ကြားပါ
Gustavo San Roman ဟုသူကပြောသည်
crappy update သည်၎င်းအလိုရှိသည့်အချိန်တွင် wifi နှင့် blot နှစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်သည်။ control panel မှ disconnect ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေ၊ ဘက်ထရီအားသွင်းအရည်ပျော်သည်။ ၎င်းသည် configuration မှလုံးဝအဆက်ပြတ်ခြင်းဟုဆိုသည့်အတိုင်းစုံစမ်းပါက crapaaaaaaaa ဖြစ်သည်
Gustavo San Románသို့အကြောင်းပြန်ပါ
ငါ Gustavo San Roman နှင့်တိုက်ဆိုင်သည်။ သူသည် ၈ နာရီအတွင်းဘက်ထရီကိုစားသည်၊ crap၊ motorola ကိုင်ထားသည်။ Startac
ဂျိုဟန် BELTRAN Marti ဟုသူကပြောသည်
iPhone ကဘာလဲဆိုတာနှင့်အတူ !!!!
ဤမျှလောက် TECNO, OGIA သို့မဟုတ် LOMARREGLEN နှင့်အတူဤဖြစ်နိုင်သော !!!!
ယောဘသည်သူ၏ ဦး ခေါင်းကိုထမြောက်စေလျှင် !!!!!!!!!!,
JOAQUIN BELTRAN MARTI သို့ပြန်သွားပါ
HEIF, iOS 11 ဖြင့်သင်၏ iDevices တွင်နေရာချွေတာနိုင်သည့် compression format
IKEA Place သည်ယခုအခါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ iOS အတွက်ရရှိနိုင်သည့်အမှန်တကယ်လျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်သည်